Kenya oo Shacab Soomaaliyeed ku Duqaysay Jubbada Hoose |
Kenya oo Shacab Soomaaliyeed ku Duqaysay Jubbada Hoose
Diyaarado dagaal oo loo maleynayo in ay leedahay dowladda Kenya ayaa duqeyn culus ka geysatay deegaanka Hoosingoow ee gobolka Jubbada Hoose, iyadoo duqeyntan ay khasaare ka soo gaartay dad Shacab ah oo aan waxba galabsan.
Sida wararku sheegayaan, Diyaaradaha ayaa laba gantaal ku dhuftay Aqal Soomaali ay deganaayeen dad reer Miyi ah, taasoo keentay in ay goobta ku geeriyoodaan laba qof, halka qof kalena uu dhaawac daran ka soo gaaray weerarkan dhinaca cirka oo loo badinayo in ay geysteen ciidanka cirka ee Kenya.
Gudoomiyaha deegaanka Hoosingow ee gobolka Jubbada Hoose Cabdixakiin Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in labada qof ee dhimatay iyo qofka dhaawacmay oo si aad ah looga yaqaano degmada ay ka argagaxeen gantaallada ay diyaaraha Kenya kudhufteen reerkaas, iyada oo duqeynta sidoo kale ay ku dhinteen Xoolo badan.
Waxa uu sidoo kale sheegay in aysan Hoosingoow ka jirin goobo Caafimaad, halka ugu dhow ee ay Caafimaad ka helaanna ay tahay Xerada Xagardheere oo qiyaastii 160KM u jirta iyo xero ay Ciidanka Amisom ku leeyihiin Dhoobleey oo 78 KM u jirta.
C/Xakiin Maxamed Maxamuud, ayaa dhinaca kale hay’adaha samafalka iyo dowladda dhexe ka dalbaday iney gargaar Caafimaad la gaaraan degmada Hoosingoow oo qarka u saaran iney ka dilaacdo xaalado dhinaca Nolosha ah, iyadoo aaney jirin cid wax iska weydiisa dadka adeeg xumada Caafimaad nolosha ugu adkaato.